Madaxwayne Maxamed Farmaajo oo la kulmaya bulshada magaalada Gaalkacyo – Radio Daljir
Janaayo 14, 2018 6:42 b 0
Madaxwaynaha dowladda faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shalay gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan la yeesho bulshada magaalada Gaalkacyo.
Wararka aanu helayno ayaa sheegaya kulanka inuu diiradda saarayo nabad galyada magaalada Gaalkacyo iyo geeddi socodka shirarka dib u heshiisiin ee ay horay dowladda uga bilowday maamulka degmada Gaalkacyo ee Puntland iyo Galmudug.
Kulanka ayaa lagu wadaa inay kasoo baxaan qodobo kusaabsan wada shaqaynta dhanka ammaanka ee magaalada Gaalkacyo iyo in lala shaqeeyo ciidamada xasilinta ee ku howlan ammaanka Gaalkacyo, kuwaasi oo kala matalaya Puntland iyo Galmudug.
Nabadoonada, ganacsatada iyo saraakiisha amaanka ayaana sidoo kale la filayaa inay qayb ka noqdaan shirkaan.
Ciidamo kasocda AMISOM oo ku wajahan Dhuusomareeb